EPD စီမံကိန်းအတွက် ကျောင်းရွေးချယ်ရန် စစ်တမ်းကောက်ခြင်း
1. နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြို့နယ်ပညာရေးရုံးများ ပူးပေါင်းပြီး တစ်မြို့နယ်စီလျှင် ပုံမှန် ၃ ကျောင်းနှုန်းဖြင့် စီမံကိန်းအတွက်သင့်တော်တဲ့ကျောင်းများကို စကာတင်ရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ပါသည်။
2. စေတနာအဖွဲ့မှ စကာတင်စာရင်းဝင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းချင်းစီသို့ လက်တွေ့ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီး ရပ်ရွာဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပါသည်။ ပထမဆုံးအနေနှင့် ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီရှိ/မရှိကို စုံစမ်းပါသည်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိသေးပါက ဒေသခံများအား ကော်မတီဖွဲ့စည်းပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။ ထို့နောက် ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ၊ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ဒေသခံများနှင့် စေတနာအဖွဲ့ဝင်များတွေ့ဆုံ၍ ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးအစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ပါသည်။
3. အစည်းအဝေးတွင် စေတနာမှ ရပ်ရွာလူထု၏တက်ကြွစွာပါဝင်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိမှုကို ဦးစားပေးသော EPD စီမံကိန်း၏မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကို ရှင်းပြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအခြေခံပညာရေးဌာန၏သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအပေါ်အခြေခံထားသည့် စေတနာ၏ ကျောင်းဆောင်အုတ်မြစ်တည်ဆောက်ခြင်းစံသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း ပြောပြပါသည်။ ကျောင်းဆောင်အုတ်မြစ်တည်ဆောက်ခြင်းမှာ ဒေသခံတို့၏ စီမံကိန်းအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရမည့်အပိုင်းဖြစ်ပြီး EPD စီမံကိန်းတွင် ရွေးချယ်ခံရရန်အတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။
4. ကျောင်းတစ်ကျောင်းစီသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီးနောက် ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးအသေးစိတ်အစီအစဉ်များ၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်များ၊ စာသင်ဆောင်အသစ်လိုအပ်မှုအနေအထား၊ စီမံကိန်းတွင် ရပ်ရွာလူထုမှာ ပါဝင်ကူညီနိုင်မှုအခြေအနေများ၊ EPD စီမံကိန်းကြောင့် ဒေသခံနှင့် အနီးအနားဒေသများအတွက် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများကို စေတနာအဖွဲ့မှ ခန့်မှန်းဆန်းစစ်ပါသည်။
5. ခန့်မှန်းချက်ရလဒ်များအပေါ်မူတည်၍ စေတနာမှ EPD စီမံကိန်းအတွက် လျာထားခံရသောကျောင်းများကိုရွေးချယ်ပြီး နောက်ဆုံးအနေနှင့် နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးနောက် အပြီးသတ်ရွေးချယ်မှုကို ပြုလုပ်ပါသည်။
1. EPD စီမံကိန်းအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသောကျောင်းများတွင် စေတနာမှ ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီဝင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးကို မစတင်မီ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂ ကြိမ်/၃ ကြိမ် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ထိုအချိန်အတွင်းတွင် ကော်မတီဘက်မှ ကျောင်းဆောင်အုတ်မြစ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေကို စုဆောင်းထားရမည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့် ကျောင်းဆောင်အရွယ်အစား၊ မျက်နှာကြက်၊ အမိုး၊ နံရံနှင့် ကျောင်းဆောင်အတွက်သုံးမည့်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကြမ်းအမျိုးအစား၊ ရေအိမ်များနှင့် မိလ္လာကန်အရွယ်အစားများ၊ မိုးရေလှောင်ကန်အရွယ်အစား၊ လိုအပ်သောစားပွဲခုံနှင့် သင်ပုန်းအရေအတွက် စသည်ဖြင့် အဓိကအကြောင်းအရာများအားလုံးကို ရွေးချယ်အတည်ပြုပါသည်။
2. ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီမှ ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် မိမိတို့ငှားရမ်းလိုသောလက်သမားဆရာနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရပါသည်။
3. အထက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များပြီးစီးပါက ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးကို စတင်ပါသည်။ စေတနာအဖွဲ့မှ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် လိုအပ်သောရန်ပုံငွေကို ကော်မတီသို့ပေးအပ်ရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် လာရောက်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးရန်ပုံငွေကိုပေးအပ်ရာတွင် ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်ဇယားနှင့် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ရန်ပုံငွေကို ခွဲဝေပေးအပ်ပါသည်။
ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာ ရာသီဥတုနှင့် နယ်မြေအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး များသောအားဖြင့် ၄လ မှ ၅လ အထိ ကြာတတ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးပြီးစီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် အသစ်ဆောက်လုပ်ထားသောစာသင်ကျောင်းဆောင်ကို မြို့နယ်ပညာရေးရုံးသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရပါသည်။